» इन्डियन लाहुरेको पिडा नसकिदै अर्का नेपाली लाहुरेलाई उस्तै पीडा ! हेर्नुहोस भिडियो इन्डियन लाहुरेको पिडा नसकिदै अर्का नेपाली लाहुरेलाई उस्तै पीडा ! हेर्नुहोस भिडियो – हाम्रो खबर
इन्डियन लाहुरेको पिडा नसकिदै अर्का नेपाली लाहुरेलाई उस्तै पीडा ! हेर्नुहोस भिडियो
admin 1441 Views
पछि मैले थाहा पाए मेरो घर नजिकैको ठेकेदारको छोरासंग उसले सम्बन्ध गासेको रहेछ । उनले एक मुस्लिम युवकसंग माया जालमा परि यति बर्षको सम्बन्ध सकिदिएको भन्दै उनले भावुक हुँदै आफ्ना कुरा राखेका छन् ।